कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन आज, कसले मार्ला बाजी? | DON Nepal कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन आज, कसले मार्ला बाजी? – DON Nepal
Home डन समाचार कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन आज, कसले मार्ला बाजी?
कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन आज, कसले मार्ला बाजी?
By Don NepalMar 05, 2018, 02:18 am0
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनकालागि आज सोमाबार निर्वाचन हुँदैछ। दलका नेताकालागि सर्वसम्मत हुन नसकेपछि सोमबार निर्वाचन हुने तय भएको हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सभापति नै दलको नेता हुनुपर्ने अडान नछाडेपछि पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले देउवालाई चुनौती दिएका छन्। आइतबार साँझ सभापति देउवा र पूर्व महामन्त्री सिंहले दलको नेताकालागि उम्मेद्वारी दर्ता गराएका हुन्।
उम्मेद्वारी फिर्ता लिनकालागि सोमबार विहान सवा आठ बजेसम्म समय तोकिएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भएपछि सभापति देउवाको पार्टीभित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ। पार्टी संचालन गर्न असक्षम भएको आरोप लगाउँदै पौडेल समूहले देउवाको विकल्प खोज्नुपर्ने बताइरहेका बेला देउवा स्वयं दलको नेताकालागि उम्मेद्वार भएका हुन्।
प्रतिनिसभा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले मात्र २३ सिट जितेको छ। प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन सांसदमध्ये देउवाको पक्षमा ६ जना मात्र रहेका छन्। कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ४० सिट जितेको छ र ती मध्ये अधिकांश देउवा पक्षीय छन्। कुल ६३ सांसद सदस्य रहेको कांग्रेसमा दलको नेता बन्न ३२ भोट आवश्यक पर्छ। प्रत्यक्षतर्फ अल्पमतमा रहेपनि समानुपातिकतर्फ देउवाको सुविधाजनक बहुमत छ।
तर गोप्य मतदान हुने भएकाले नतिजा कसको पक्षमा जान्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यतिबेला कांग्रेसभित्र देउवा अलोकप्रिय छन्। प्रत्यक्षमा ६ जना, समानुपातिकमा ३० जनागरी देउवा पक्षमा यतिबेला ३६ सांसद रहेका छन्। तीमध्ये पनि सिटौला पक्षका ३, गच्छदारपक्षका ३ र खुमबहादुर पक्षका दुई जना सांसद छन्। गच्छदार देउवा पक्षमा खुलेपनि सिटौला र खड्का मौन छन्। र यी दुवै नेता देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन्। यद्यपी प्रकाशमान सिंहसँग कृष्ण सिटौलाको सम्बन्ध चिसिएको छ जसका कारण सिटौला पक्षको भोट सिंहलाई जाने संभावना कम देखिन्छ।
Previous Postतपाईँमा पनि हातगोडा बाउँडिने समस्या छ ? कारण यस्तो हुनसक्छ ! Next Postकुख्यात हत्यारा कतारबाट नेपाल ल्याइयो | जसले श्रीमती, सासू र ससूरासहित नौ जनाको हत्या गरेका थिए